Isiphephelo saseValle Leones - Puerto Tranquilo - I-Airbnb
Isiphephelo saseValle Leones - Puerto Tranquilo
Las Torres, XI Región, i-Chile
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Fernando
Isiphephelo sitholakala eValle Leones etholakala imizuzu engama-30 ukusuka ePuerto Tranquilo. Kuyisizinda esihle kakhulu sezinsuku zokuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni zeqhwa ezisenyakatho kanye nemisebenzi yezokuvakasha ye-adventure kanye nokuzulazula kuma-glaciers.
Isiphephelo siphakathi kweSigodi, sinamandla elanga, kanye nemibono emihle kakhulu yezintaba.
Kuyisiphephelo esintofontofo kakhulu esitholakala esigodini esinamathuba amaningi okuhamba ngezinyawo ukuya ezingcwecweni zeqhwa eCampo de Hielo Norte kanye nokugibela amahhashi. Yindawo yabantu abathanda ezokuvakasha ezisebenzayo.
Indawo yokukhosela ishiselwa isitofu sezinkuni esifudumeza kanyekanye amanzi ashisayo okugeza. Asikho i-heater yamanzi ngakho-ke kuyadingeka ukubasa umlilo ekhishini ukuze ube namanzi ashisayo.
KuyiSigodi esinabantu abambalwa kakhulu, indawo enikeza ukuthula kanye nokujabulela imvelo endaweni yokuvakasha engathuthukisiwe.
I-El Valle inesiginali ukuze ukwazi ukuxhumana nami ngocingo noma nge-imeyili